Vamwe Vagadziri uye Vanopa | China Vamwe Fekitori
Dhaimondi simbi zvikamu zvekucheka kana kukuya kongiri nematombo
Dhaimondi simbi zvikamu zvinoshandiswa kucheka kana kukuya kongiri uye matombo maburi .Made ine yakasarudzika fomula. Madhaimani zvikamu zvine simba rakakwira, huwandu hwakawanda, unopinza kupfeka kuramba uye hupenyu hwakareba. Izvo zvikamu zvesimbi zvinowanikwa mune akasiyana maumbirwo uye hukuru, matope uye zvinonamatira zvinogona kuve zvakagadziriswa.
3, Ez Change Chinja HTC Resin Pad Adapter
HTC EZ adapteri yekukurumidza kutsiva resin kupukuta mapedhi pane HTC michina. Inogona kushandurwa kuti ishandiswe pane akawanda akasiyana magiya nekukuchina michina. Iyo nylon quilt yakagadzirirwa kunamatira zvakasimba paganda, uye haizokuvadzwe nekudzokorora misodzi. Yakanaka, inoshanda uye inodhura.
5 padiki M14 Thread Diamond Polishing Pads Packer Pad Aluminium Backer Mapedhi Angle Grinder Adapter
5inch M14 Thread Diamond Polishing Pads Packer Pad Aluminium Backer Mapedhi Angle Grinder Adapter.Seiri resin yekukwesha pad mubati Backer Mapedhi eAngle Grinder Adapter .Quick shanduko, inoshanda zvakanyanya. Ipai yakasarudzika masevhisi kuzadzisa chero akakosha anodikanwa.
Resin makorari Pad mubati velcro rabha tsigiro ikanyanya 4 ″, 5 ″, 7 ″
Resin makorari padhi inobata velcro yerabha inotsigira pad inoshandiswa kushandiswa kubatanidza polishing pad kukona grinder.Super yakasimbisa adhesive inodzivirira chero kupatsanurwa kweVelcro kubva kune yerabha backer pachayo.Yakatsemuka uye inogara kwenguva refu. Isu tinopawo mabasa ekugadzirisa kuti azadzise chero sarudzo yakasarudzika.
Carbide Bush Hammer Roller Bits ematombo uye Concrete nzvimbo
Carbide Bush Hammer Roller Bits ndeyematombo uye Concrete nzvimboKuti iite nzvimbo yakaoma uye Isingatsvedza pasi, kunge litchi kupedzisa pamusoro.High kupfeka kuramba uye hupenyu hwakareba.Aggressive uye inoshanda.Gwenzi-sando rollers base inogona kuitwa neakasiyana kubatana kune kukwana pamichina yakasiyana.
Lavina Diamond Bush Hammer rollers ekugadzira kongiri pamusoro yakaoma
Diamond Bush Hammer rollers ekugadzira iyo nzvimbo yakaoma uye Isingatsvedza pasi, kunge litchi kupedzisa pamusoro.Iyo inogona kana isina iyo ndiro.Tinoita zvakasiyana musango sando rollers kune ese marudzi emagetsi emachina mahwendefa, saLavina, Husqvarna, HTC, Terrco , nezvimwe. Isu tinopawo mabasa ekugadzirisa.
Marble Granite Concrete Diamond Kona Kukanda Zvishoma Zvidimbu zveCorner Grinder
Dhayamondi pakona kurodza maturusi anoshandiswa kurodza makona, masitepisi, pasi pemakabati, makakombama, beveled yakapinza micheto, nezvimwewo.Inokodzera kukuya marudzi ese ekongiri pasi uye nematombo nzvimbo.Yakakwira kukuya kurongeka kunoita iyo yepamusoro mhando yakanaka mushure mekurapa.Fast kukuya, yakakwirira kukuya kuita.